HORDHAC: Cardiff v Manchester United – Gool FM
( Premier League ) 22 Dis 2018. Manchester United ayaa booqaneysa dhigeeda Cardiff City kulamada 18-aad ee Premier League Asbuucan.
Red Devils ayaa shaqada tababarenimo ka erisay Mourinho kaddib qasaaro kasoo gaartay Liverpool todobaadkii tagay, waxaana xilka si ku meel gaara loogu dhiibay Ole Gunnar Solskjær oo kullankiisa ugu horreeysa wajihi doona kooxda uu sagaal bilood leyliyay.
Garoonka: Cardiff City Stadium
Daafaca bidix ee Cardiff Joe Bennett ayaa tababaran asbuucan sababo la xariira dhibaato sinta ah iyadoo uu shaki buuxa ku jiro kullankan.
Laba cayaariyan oo aan la magacaabin ayaa sido kale laga daaweynayaa “dhibaato yar “, sida laga soo xigtay macalin Neil Warnock.
Manchester United ayaa qarka u saaran iney weyso Romelu Lukaku, kasoo sida la warinayo la siiyay fasax uu ku baxay.
Alexis Sanchez ayaa ku maqan dhibaato muruqa ah, halka Chris Smalling, kasoo ku dhaawacmay waqtigii is kululeyna dheeshii Liverpool, uu shaki ku jiro.
Maamulaha ku meel gaarkaa ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa go’aan ku gaaray haddii uu u yeerayo Paul Pogba iyo Anthony Martial, oo labaduba badal kusoo galay kullankii guuldarrada ay kala soo laabteen Anfield.
Waxaa laga joogaa 58-sano tan iyo Cardiff markii u dambeysay oo ay garaacday Manchester United, cayaar ay kaga badiyeen 3-0 cayaaraha sare ee horyaalka bishii November 1960.
Kooxda Red Devils ayaa guuleysatay shan kullan oo isku xigta todoba jeer oo ay la kulantay kooxda Cardiff.
Marka kaliya oo ay booqdeen garoonka Cardiff City Stadium waxay aheyd cayaar ku dhamaatay 2-2 oo dhacday bishii November 2013.
Cardiff ayaa badisay afar kamida shan kullan oo ay Premier League ku cayaartay garoonkooda, tasoo ka badan 22-cayaar kulamo ay badin waayeen tartanka.
United ayaa laga adkaaday seddaxdii kulan ee u dambeysay oo ay u martiyeen Premier League kooxaha usoo dalaca, taa oo ka badan inta aysan guuldarreysan 36-doodii kullan oo ay hore ula dheeshay naadiyaada dhawaan galkaa cayaaraha sare ee horyaalka (27 guul, iyo 6 bar-baro).
Waqtigii u dambeyay oo ay guuldareystaan afar kullan xariira cayaaraha sare horyaalka oo ay ka hortagto kooxaha dhawaan galka ku ah horyaalka waxay aheyd March 1960 ilaa November 1961, waana guuldarrooyinka kamid aheyd 3-0 qasaraa oo kasoo gaartay Cardiff.
HORDHAC: Manchester City v Crystal Palace